style cusub Korea ayaa wadnaha ahama quful la surto oo ku caashaqa oo muhiim ah - Shiinaha Jinyun Jewelry
Ahama Steel cagahooda
bangles silig steel
Ahama Steel fidlo
dugaagado link Chain
Watch Band fidlo
Ahama Steel hilqado
Ahama Steel dajisaa dahabka
Stones Semi-qaali ah ay dajisaa Jewelry
Ahama Steel murriyado
Ahama Steel murriyadihii
Semi-qaali Stones murriyadihii
Ahama Steel siddo
siddo oo dahab qufilan
siddo midabka steel
The style cusub Korea ahama muhiimka ah wadnaha qufulka ku caashaqay surto
Qiimaha / $: 1,2835
miisaanka / g: 6
U dir email noo More Products Latest Download as PDF
Na ku saabsan Julong Jewelry oo la asaasay 2006. Shirkadda Our waxa uu ku yaalaa ee Guangzhou, Shiinaha. Waxaan ku takhasusay ahama Steel Daad Jewelry by B2B oo ka badan 10 sano ee ganacsiga ee line this. Ilaa hadda, waxaan la soo wada leh in ka badan 300-qeybiyeyaasha tan iyo markaas iyo inay u leeyihiin habka lacag bixinta ugu haboon, qiimaha iyo adeegyada loogu talagalay macaamiisha our ugu fiican. Waxaa jira in ka badan 100,000 oo naqshado kala duwan waxaad ka heli kartaa boggayaga internetka, www.julongsteeljewelry.com . All lagu daydo cusub la cusbooneysiin doonaa toddobaadka kasta oo ku saabsan ka badan 2000pcs waxyaabaha cusub. Products loogu kala duwan yihiin kuwo aad u ballaaran oo si buuxda u dhergin karo macaamiisha badan oo kala duwan ka soo baahida dal oo kala duwan '. Waxaan leenahay in ka badan 10,000 oo xubin ka diiwaan gashan yihiin ka adduunka oo dhan, waxay sida caadiga ah ka dhigi lahaa si joogto ah dib-u-stock oo iyagaan ku soo kicin lahaa dad badan oo ku haboon tan iyo macaamiisheena u baahan tahay oo kaliya oo ku saabsan 3-15 maalmood si ay u helaan alaabtooda.
Waxaan ku siin waxyaabaha qiimaha aad u yar yahay iyo habka lacag bixinta deg deg ah oo ku haboon, sida Pay-kumuunayaasha, kala iibsiga Bank, ururka reer galbeedka iyo garaam Money. Haddii aad xiisaynayso, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriir la. Email: julong@julongsteeljewelry.com Whatsapp: +86 18028698162 tixgalin Maxay yihiin faahfaahinta soo saarka? . Waxyaabaha: ahama tayo sare leh . Features: nickel lahayn, lead, miridhku, ilaaliyo maqaarka . Loogu talagalay Duugga shakhsi ama aabbe, hooyo, saaxiib, laba, laba Christmas, Halloween, dhalashadiisa, hadiyado guuradii. . 1 00% tijaabiyey, 100% tayada ballan qaaday! . Isticmaal nadiifinayo muraayad, si ay dusha sare ee gloss texture dheeraad ah. . Ka dib markii darane badan oo qurux badan, hufan. Flat aan protrusion. Maxaad u dooratay shirkadda? Waxyaabaha Main - kuul la surto, dugaagado, dugaagado, iyo hilqado, iyo murriyado, siddo oo muhiim ah, iwm
Kala duwan accessories ahama. Model Business - Annagu waxaannu nahay xirfad iyo khibrad dahabka saaraha ah tan iyo 2006 gacanta ku Tayada - waxaan leenahay afar habraacyada kontaroolka tayo adag oo ku kalsoon tahay masuuliyadayada kaliya. R & d - waxaan leenahay koox xirfadeed ee shurako Eebe oo u nugul yihiin accessories fashion. Siyaasadda celiyo iin - - waxaan si adag u eegi doonaan alaabtii oo dhan 3 nidaamyada ka hor shixnad. Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo tayo leh oo ay sabab u tahay bixinta, fadlan noo soo sheegtaa wakhtiga (15 maalmood gudahood ka dib markii aad hesho baakadka). Waxaan aad soo celin doonto ama aad bedelo si xiga.
Thanks for waydiinta. Waxaan nahay ahama soo saaraha dahabka iyo wholesaler, sidaas oo moq waa USD 300, 3 kumbiyuutarada per design per size. Laakiin haddii aad u baahan tahay saamiga si ay u tijaabiso, waxaad ka dalban kartaa USD 100 ugu yaraan, qiimaha maraakiibta ku saabsan tahay USD 30 1 kg. Rabto annagu waxaannu ku dhisi karaan ganacsi fiican oo saaxiibtinimo. tixgalin Bella
Nala soo xiriir Waxaan mar walba qof on gacanta in ay ka jawaabaan su'aalahaaga. Waxaan aaminsan nahay in khadka waqtiyeynta ee adeegga macaamiisha, iyo sameyn doonaa wax walba oo suuragal ah si dhergin macaamiisheena. Haddii aad qabto wax dhibaato ah, comments, ama talooyin, fadlan la xiriir nala. email: julong@julongsteeljewelry.com Heerka Xubin: (wadaa lacagta si aad, aad ku raaxaysan doonaa disccount heer oo kala duwan) Level1 5% Level2 8% Level3 10% Level4 12% Level5 15% Level6 18% Level7 20%
Sida aan ka helnay amarada iyo aad u badan maalin walba, waxaan beddelo habka shaqada our si ay u siiyaan adeeg wanaagsan loogu talagalay macaamiisha our iyo in la hubiyo macaamiisheena heli kartaa amar ah in wakhtiga. Ka dib waa tallaabo cusub oo shaqada: (Sida ay Bejing Time) 1. Subax kasta, waayo, kulli amar cusub oo lagu siiyo mar hore ka hor 12:00 duhurnimo, waxaan kuu diyaarin doonaa, oo hubi stock ee isla maalintaas. Haddii aad lacag ka dib markii 12:00 duhurnimo, waxaan kuu diyaarin doonaa, oo hubi stock ee maalinta ku xigta. 2. Ka dib markii aad heshay liiska xirxiraan, haddii aad ka dhigi kartaa bixinta final ka hor 6:00 pm, waxaan markab kartaa amarka at isla fiidkii. Haddii aad lacag ka dib markii 6:00 pm, waxaan markab doonaa amarka in maalinta ku xigta. 3. amar ku bixisay, haddii aad dhigay isagoo intaa ku daray si dhamaystirka dheelitirka ka hor 12:00 duhurnimo, waxaan kuu soo diri doonaa liiska ugu dambeeya ee lagu cabayn ee la mid ah fiidkii iyo markab soo baxay amarka in maalinta ku xigta. Haddii aad amarka ku daray dhamaystirka dheelitirka ka dib 12:00 duhurnimo, waxaan kuu diyaarin doonaa amarka ku daray oo diri liiska xirxirida final in maalinta ku xigta aad iyo amarkan uu noqon doono markab ka dib markii berri. Ka hor inta aadan si ka dhigi, fadlan si raxmad leh diyaarin markii sida ay xaaladaada gaar ah. Sorry sahlaansashada kasta oo idinka dhigay inaad. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan si xor ah u soo xiriir nala. Thanks. Salaan wanaagsan.
account Paypal: julong@julongsteeljewelry.com Western Union Fadlan la xiriir nala ka hor inta aanad lacagta ururka reer galbeedka, si loo hubiyo magaca aqbalana ee. Bank Information Transfer account Company
Faa'iideystaha Name Bank HSBC
magaca shirkadda Jinyun Trade Limited
faa'iideystaha Bank 1 Queen ee Road Central, Hong Kong
Siyaasadda Shipping Waxaan markab cinwaanka kasta oo dunida. Items amartay inaga dhex waxaa geeyey by EMS ama TNT ama oogeen ama FedEx ama UPS. Waxaan kuu sheegi doonaa la raad No. by e-mail sida ugu dhaqsaha badan aad kala geeyey marka waxaan ka shirkadda express hesho. cinwaanka jidka A waxaa looga baahan yahay bixinta. Baayacmushtarkaagii waxaa loo dhiibi doonaa albaabka Air-express caadiga ah albaabka, taas oo qaadataa qiyaas ahaan 3-5 maalmood oo shaqo. waqti Delivery ha ku darin markii processing. Waxyaabaha lagu geeyey baxay maalin kasta, laga bilaabo Isniinta ilaa Sabtida, marka laga reebo fasaxyada. Amarada intooda badan kaalinta maalmaha lagu keeni doonaa in 2 ama 3 maalmood, halka amar kaalinta maalmaha fasaxa lagu keeni doonaa Isniinta soo socota. Waxaad heli doontaa xaqiijin e-mail ah tirada statistics aad. Afar iyo labaatan saacadood ka dib markii aad hesho tirada statistics aad, waxaad awoodi doontaa inaad si ay ula socdaan aad si online at noqon doonaa http://www.ems.com.cn/english-map.jsp http://www.tnt.com /: http /www.dhl.com/en.html http://www.ups.com/en.html http://www.fedex.com waqti Delivery kala duwan yihiin iyada oo ku xiran dalka u socoto.
Hababka Shipping our Delivery dahabka julong wuxuu dhisay iskaashi adag oo dhan afar shirkadaha maraakiibta waa weyn: oogeen, UPS, FedEx iyo TNT si ay u bixiyaan bixinta caalamka oo xirfad leh albaab-ilaa-albaab. Waqtiga dirida Waxyaabaha la geeyey doonaa maalmaha soo socda ka dib markii ganacsi aad ka hubisay baxay. Guud ahaan, waxa laga yaabaa inay qaadato ku saabsan 3-5 maalmood oo shaqo bixinta, taas oo ku xidhan gaarsiinta kala duwan waxaa loola jeedaa waxaad dooran. Waxaan mas'uul ka ah cinwaanka qaldan ama undeliverable ma aha. Fadlan hubi cinwaanka maraakiibta waa sax iyo deliverable dhigi. Order Tracking Waxaan laguu ogolaado in aad si ay ula socdaan aad si at click ee mouse a. Marka shixnad waxaa xaqiijiyay, waxaad heli doontaa tiro ka mid ah raad aad xaqiijin e-mail. Mudo intee leeg ayay qaadan doontaa, waayo, wax inaad i soo gaaraan? Fadlan la soco in maalin maalmaha shaqada, marka laga reebo Sabtida, Axadda iyo Ciidaha Guud, waxa loo xisaabinayaa marka la eego xilliga dhalmada. Guud ahaan, waxa ay qaadataa oo ku saabsan 3-5 maalmood oo shaqo bixinta. Sidee baan ula socdaan karaa shixnad? Waxaan markab aad iibsatay ka hor dhamaadka maalinta ganacsiga soo socota ka dib markii aad ka hubisay-baxay. Waxaan soo diri lahaa e-mail tiro raadraaca si aad u eegi kartaa horumarka ee bixinta at 'website-ka side. Maxaan sameeyaa haddii aan shixnad marnaba yimaado? Fadlan kor u ogolaan in 10 maalmood oo shaqo aad item in loo dhiibo. Haddii ay weli ma timaado, fadlan nala soo gaadho adigoo gujinaya ah "Contact Us" button website-ka. Waxaan ka heli doontaa dib si aad u dhakhso ah.
Previous: Dhunkado Boy iyo Girl la surto oo Fashion ahama Steel Jewelry Calan for Valentine
Next: dahabka design fudud 316 ahama siddo midabka steel
Angel la surto
Black Ciise Cross la surto
jabaysa Heart la surto
Lamaanihii Love Fashion la surto
Lammaanayaasha jabaysa Heart la surto
Lammaanayaasha Heart la surto
Fashion Heart la surto
Fashion la surto
Fashion Rhinestone la surto
sabayn Locket la surto
Ciise Cross la surto
ahama Heart la surto
ahama Steel Custom dhigay la surto
ahama Steel Dumbbells la surto
ahama Steel Ciise Cross la surto
Women la surto
Ahama Steel Lamaanihii Jewelry L Lamaanihii Chinese ...
Dhunkada Boy iyo Girl la surto oo Fashion ahama STE ...
Labada ciyaaryahan Ragga Dumarka ahama Steel jeclaa Ne Lamaanihii ...
Ahama Steel Letter Waxaad jeclaada More Heart Tag ...
Daad xayaysiis ahama Steel jeclaa Pen ...
Factory iibinta ahama wadnaha sh laba steel ...